Taliyihii ciidamada Itoobiya Janaraal Seare Mekonnen oo ilaaladiisu toogasho ku dishay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeEast AfricaTaliyihii ciidamada Itoobiya Janaraal Seare Mekonnen oo ilaaladiisu toogasho ku dishay
Taliyihii ciidamada Itoobiya Janaraal Seare Mekonnen oo ilaaladiisu toogasho ku dishay
June 23, 2019 Puntland Mirror East Africa, World 0
Taliyihii ciidamada dalka Itoobiya Janaraal Seare Mekonnen. [Sawir Hore]
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Taliyihii ciidamada dalka Itoobiya Janaraal Seare Mekonnen ayaa ilaaladiisu toogasho ku dishay gudaha caasimada Addis Ababa, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiska raysulwasaaraha Itoobiya.
Isku day afgembi oo ka dhacay gobolka Amxaara ayaa sidoo kale lagu dilay madaxweynihii maamul goboleedka Amxaarada Ambachew Mekonnen.
Taliyaha la dilay ayaa xilka hayay muddo sanad ah kadib markii raysulwasaare Abiy Ahmed uu magacaabay.
Masuuliyiinta Itoobiya ayaa sheegay in dilka taliyaha iyo isku dayga afgembiga uu xiriir ka dhaxeeyo, waxayna ku eedeeyeen Asaminew Tsige oo ah taliyaha ciidamada amaanka ee gobolka Amxaara. Ma cadda in la xiray sargaalkaas la sheegay in uu ka dambeeyo afgembiga dhicisoobay.
“Isku dayga afgembiga ee maamul goboleedka Amxaara waa mid ka soo horjeeda dastuurka ujeedkiisuna yahay in lagu aaso nabadgelyada sida adag loogu guuleystay ee ka jirta gobolka,” xafiiska raysulwasaaraha ayaa sidaa ku yiri war-saxaafadeed.
Iskudayga afgembi ee Amxaara waa caqabadihii ugu dambeeyay ee uu wajaho Abiy, kaasoo la doortay sanadkii lasoo dhaafay.
Inta uu xafiiska joogay, waxa uu sameeyay isbadalo siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo soo jiitay quluubta dad badan, isbadaladaas oo ay kamidtahay sidii la yaabka lahayd oo u aqbalay in uu heshiis la gaaro Eriteeriya oo ahayd cadowga ugu weyn ee Itoobiya.
June 23, 2019 Madaxweynihii maamul goboleedka Amxaarada ee dalka Itooboya oo lagu dilay inqilab fashilmay
June 24, 2019 Sargaalkii hoggaaminayay inqilaabkii fashilmay ee Itoobiya oo la dilay
March 10, 2019 Ma jirto cid ka badbaaday burburka diyaarada Ethiopian Airlines
November 21, 2018 Niman hubeysan oo gobolka Kilifi ee Kenya ku afduubtay haweenay Talyaani ah oo ka shaqeysa gargaarka
Madaxweynihii maamul goboleedka Amxaarada ee dalka Itooboya oo lagu dilay inqilab fashilmay
Ciidamada ammaanka Puntland oo saddex nin oo lala xiriirinayo Al-Shabaab ku xiray Gaalkacyo
Tirada dhimashada weerarkii huteel Boosh ee Muqdisho oo gaartay 19 qof
Muqdisho-(Puntland Mirror) Tirada dhimashada qaraxii gaariga ee lala eegtay huteel Boosh ee Muqdisho shalay oo Arbaco ahayd, ayaa gaartay 19 qof, sida ay sheegeen ilo-wareedyo caafimaad. Shan dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab kuwaas oo weeraray huteelka [...]
Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Galmudug oo dib uga qarxay duleedka magaalada Gaalkacyo
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Galmudug ayaa saakay oo Axad ah dib uga bilaabmay duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, sida ay ilo-wareedyada sheegayaan. Dagaalka manta oo [...]
Maxamed Rooble Jimcaale Goobaale oo ahaa sarkaal sare oo ciidamada DFS katirsan iyo lix kamid ahaa ilaaladiisa oo lagu dilay qarax-gaari oo ka dhacay Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maxamed Rooble Jimcaale oo kamid ahaa saraakiisha ugu saraysa ciidamada militariga ee dowlada federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah lagu dilay qarax isbiimayn ahaa oo ka dhacay meel u dhow xarunta wasaarada [...]